Tirada geerida weerarkii masrixa Muqdisho oo gaartay lix - Sabahionline.com
Tirada geerida weerarkii masrixa Muqdisho oo gaartay lix Abriil 09, 2012
Labo dhibbane oo ka mid ah dadkii ay Arbacadii wax ku gaareen weerarradii is-qarxinta ee Masraxa Qaranka Muqdisho ayaa dhaawacyadii u geeriyooday dhammaadkii toddobaadka, taas oo lix ka dhigaysa tirada dadka geeriyooday, Garowe Online-ta Soomaaliya ayaa arrintaa Axaddii (8-dii April) werisay. Qodobbo la xiriira
Raysal wasaaraha Soomaaliya: Al-Shabaabku ma cabsi-gelin doonaan Soomaaliya
Qarax Baydhabo ka dhacay oo 12 ku diley suuq dadku ku badan yahay
500 oo ku qalin jabisey Jamciyadda Dhallinta Soomaaliyeed (SYL)
Xildhibaan Mawliid Macaani Maxamuud iyo Faysal Xaaji Cilmi oo ahaa la taliyaha raysal wasaare Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ku geeriyooday isbitaalka Aga Khan ee ku yaal Nairobi halkaa oo daweyn loo geeyey ka dib markii ay wax yar yiilleen cisbitaalka Madiina. Axaddii ayuu Cali dhambaal tacsi ah u diray ehelladii dadka geeriyooday, isagoo weerarkana ku sheegay wax laga yaq-yaqsoodo, sida ay werisay wakaaladda wararku. “Faysal wuxuu ahaa nin u go’ay hagaajinta iyo sii wadidda dawladdan waxaanan rajeynayaa in Eebbe uu jannadii geyn doono,” ayaa lagu yiri oraahda. Sidoo kale, xildhibaannada ayaa tacsi iyaguna u diray qoysaska jaallahooda geeriyooday ee Maxamuud, iyagoo sheegay in uu geesi ka baxay, RBC-da Soomaaliya ayaa werisay. Muxuu kula yahay qoraalkan?